Sanadguuradii 7aad Ee Xuska 7aadka Cadaalada Oo Siwayn Looga Xusay Deegaanka - Cakaara News
Sanadguuradii 7aad Ee Xuska 7aadka Cadaalada Oo Siwayn Looga Xusay Deegaanka
Jigjiga(cakaaranews)Axad 30ka April 2017. Munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay, laguna maamuusayay sanadguurada 7aad ee 7aadka cadaalada islamarkaana ay kasooqaybgaleen dhamaan mas’uuliyiinta hay’adaha cadaalada DDSI, shaqaalaha hay’adaha cadaalada, culimo awdiinka, oday dhaqameedyada deegaanka, ciidamada kaladuwan ee deegaanka iyo martisharafkale ayaa kaqabsoomay xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga.
Hadaba, xuskan 7aadka cadaalada ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Gudoomiyaha Maxkamada Guud ee DDSI mudane Cabdulaahi Ugaas Maxamuud oo sheegay in munaasabadani ay tahay munaasabad lagu xusayo 7aadka cadaalada oo 7 jirsatay. Wuxuuna xusay gudoomiyuhu in ay munaasabadani tahay mid ahmiyad wayn uleh deegaanka, lagana xusayo dhamaan deegaanka. Wuxuuna intaa kudaray in systemka dawladeed ee maanta deegaanku haysto ay kusalaysan yiihiin dhamaantood cadaalad. Cadaaladuna aytahay tiir balaadhan oo lagu hanto horumar iyo maamulsuuban.
Sidookale, wasiirka xafiiska xeer ilaalinta guud iyo cadaalada mudane Cabdijamaal Axmed Qaloonbi oo kahadlay munaasabadan ayaa sheegay in xuskani uu yahay xuskii 7aad islamarkaana ay cadaaladu tahay mid sal u ah ama ka turjumaysa dhamaan horumarka deegaanka kajira. Iyadoo dhamaan hay’adha cadaalada deegankuna ay yihiin kuwa kusalaysan nidaam cadaali ah. Wuxuuna tilmaamay in nidaamka cadaaladeed ee deegaanku uu marayo meeshii ugu fiicnayd ee uu abid gaadho.
Wuxuuna carabka kudhuftay masuulku in halkudhaga xuskani yahay ‘’Nidaamka tastuuriga ah ee kudhisan taageerada adag ee shacabka ayaan hanaanka maamulka suuban ku hirgalinaynaa’’
Dhanka kale Hogaankuxigeenka Xafiiska Nabadgalyada Maamulka iyo Cadaalada mudane ibraahim maxamud mubaarak oo sheegay in munaasabadani katurjumayso cadaalada iyo sinaanta qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkeena. Wuxuuna xusay in sidookale munaasabadani ay katurjumayso hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalku haysto. Iyadoo xukuumada DDSI ay kakeentay guulo waawayn oo wax ku aal ah dhanka xasilinta nabadgalyada iyo cadaalada isagoo tilmaamay in ay balanqaadayaan inay sii xoojiyaan kudhaqanka cadaalada
Ugudanbayna, culimo awdiinka iyo oday dhaqameedyada deegaanka oo dhamaantood tilmaamay in xuskan 7aadka cadaaladu uu yahay midlagu xasuusto dhibaatooyinki xumaa ee deegaanka soomaray islamarkaana lamaamuso meesha wanaagsan ee lagaadhsiiyay cadaalada deegaanka iyagoo tilmaamay in cadaaladu ay tahay waxyaabaha waawayn horumarka salka kuleh. Sikastaba ha ahaatee xuskan 7aadka cadaalada oo soconayaa maalmaha ayaa lagu wadaa in lagu sooobandhigi doono aqoon iswaydaarsiyo kaladuwan oo kusalaysan cadaalada deegaanka.